Isikhokelo se-Semalt KubaQaleli: Indlela yokwenza amawebhusayithi
I-Web scraping inceda abasebenzisi ukuba bakhuphe idatha ehlukeneyo kwiisayithi ngaphantsi kwenetha. Namhlanje, ukuba usebenzisa izixhobo zokukhipha ezifanelekileyo, unokukhuphela phantse nayiphi na into oyithandayo. Kukho iinkqubo zeprosoft ezinika iinketho ezinkulu zokukhangela. Enyanisweni, ukuhluma kunamaphepha amaninzi. Umzekelo, unokufumana uluhlu oluhlukileyo, oonxibelelwano, ii-imeyile, iimveliso kunye nezinye ezininzi. Ngenxa yoko, ezininzi iinkampani ze-SEO kunye nee-e-venkile zisebenzisa le ndlela kuphucula umgangatho weenkonzo zabo.
Kukho iiwebhsayithi ezingavumeli ukutshiza. Ngoko, abasebenzisi kufuneka baqaphele xa bevakashele iphepha lewebhu ukukhupha izinto ezithile. Kufuneka ukuba ufunde imimiselo kunye neemeko zewebhusayithi nganye oya kutyelela ukuqinisekisa ukuba awuphuli nayiphi na imithetho. Ngaphandle koko, unokufuneka ubhekane neengxaki ezininzi, njengemiba esemthethweni. Abaphandi bewebhu kufuneka bakhumbule ukuba bangasebenzisa ukukhwa kwewebhu njengesixhobo esinempumelelo kwimisebenzi yabo kwaye bakhuphe umxholo ngezizathu ezifanelekileyo. Ngokomzekelo, unokufuna ukufumana amanani eminye imikhiqizo okanye ulwazi oluqhagamshelana nabathengi abanokuthi. Oku kunokukunceda ukuphucula iinkonzo zakho ngokubonelela ngemveliso ephezulu kwixabiso elifanelekileyo.
Iprogram yeProgram yePython
Ukukhutshwa kwewebhu kungenziwa ngokusebenzisa iilwimi ezahlukeneyo. Umzekelo, i-web scrapers inokusebenzisa iprogram yeprogram yePython, ulwimi olulula nolushukumisayo lwenkqubo olunikeza ezininzi iipakethi ezifanelekileyo kubasebenzisi balo. Enyanisweni, sisixhobo esikhulu sokukhupha abaqalayo okanye abasebenzisi abanolwazi. NgePython, kulula kakhulu ukukhipha idatha phakathi kwemizuzu nje ngokusebenzisa enye yamathala eencwadi. Ngokomzekelo, unokusebenzisa iSobho Sokuhle, esiyisixhobo esikhulu sokuqokelela ulwazi oluvela kwiwebhu.
Abasebenzisi abafuna ukufikelela kwisiza esithile kwiwebhu, kufuneka bakhuphe ikhowudi ye-HTML ukuze bahlalutye kamva. I-HTML ikhowudi equle yonke inkcazelo enxulumene nomsebenzisi onokuyidinga. Ngenxa yoko, ulwazi olufunekayo, njengoluhlu lwezonxibelelwano okanye amaxabiso, lunokufumaneka ngokuhlalutya le khowudi. Abaphangeli bewebhu bangasebenzisa ilayibrari ethile, njengeCrase okanye iSobho esilungileyo, ukuxubusha ikhowudi ye-HTML kwaye ufumane yonke idatha efunekayo ngemizuzwana. Kodwa ungayifaka njani ikhowudi ye-HTML? Okokuqala, kufuneka uhlolisise ukuba idilesi ye-HTML onayo ilungile kwaye uqinisekise isihloko sephepha. Unako ukuqhubela phambili ngokuqokelela yonke inkcazelo ethile apha kweli phepha. Ukuze uphumelele, kufuneka uhlaziye isakhiwo sekhowudi ye-HTML. Yenza oku ngokusebenzisa i-Chrome Inspector Source .